Valan-javaboary fialamboly akaikiko | Zaridaina lohahevitra 35 tsara indrindra ho an'ny ankizy any Angletera
Valan-javaboary manodidina ahy | Zaridaina lohahevitra 35 tsara indrindra ho an'ny ankizy any Angletera
By Chrisking Septambra 16, 2021 Travel 0 Comments
- Valan-javaboary manodidina ahy -
Rehefa manakaiky ny fialantsasatry ny sekoly dia hitady toerana hialana sasatra ny fianakaviana. Noho izany dia nanangona lisitr'ireo zaridaina ankafizinay indrindra izahay hankafizan'ny tanora sy ny tanora ao am-po.
Na izany aza, misy valan-javaboary misy lohahevitra tena misongadina amin'ny toerana manome toerana manintona mahafinaritra ho an'ny ankizy kely tsy dia be herim-po sy tsy mahazaka.
Ny valan-javaboary fialamboly no toerana mety indrindra hanatrehana hamela ny zanakao hanapoka ny etona sasany natsangana. Manome fientanentanana lehibe ho an'ny ankizy lehibe ny morontsiraka amoron-dranomasina sy ny sary miolakolaka.
Ankizy goavambe ao am-po izahay, noho izany tianay ny mankeny amin'ireo valan-javaboary, fa miaraka amin'ny ankizy iray. Noho ny vidin'ny tapakila dia mankanesa any amin'ny valan-javaboary misy akaninjaza indraindray tsy dia misy dikany.
Ny zaridaina lohahevitra dia tsara ho an'ny fitsangantsanganana feno fianakaviana feno fahafinaretana, saingy tsy lavorary foana izy ireo raha manana zanaka kely tsy ampy taona amin'ny dia.
Avy eo koa ireo rollercoasters mampihetsi-po, izay mety ho tian'ny tanora sy ny ankizy lehibe kokoa nefa mampatahotra loatra ny ankizy kely kokoa - ary na dia be herim-po aza izy ireo, dia mety tsy ho afaka mitaingina raha tsy lava loatra.
Ny vaovao tsara dia ireo zaridaina lohahevitra no nahamarika ary manamboatra mba hanomezana fahafaham-po ny zaza sy ny ankizy kely, ary koa ny fampidirana singa fanampiny hanatsara ny valan-javaboary.
Izahay dia miresaka momba ny toerana voatokana, ny manintona ankizy kely, ary ny toerana filalaovana malemy ahafahan'izy ireo mandany fotoana.
Misy zaridaina lohahevitra maromaro any UK izay mety amin'ny zazakely sy ny ankizy kely, ka mahatonga azy ireo ho tsara hivoahan'ny fianakavianao manaraka.
Zaridaina fialamboly tsara indrindra 35 any akaikiko any UK no aleha amin'ny ankizy
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo Parks Amusement Near Me:
Ity dia iray amin'ireo Parks Amusement Near Me.
Peppa Pig World dia teny mahafinaritra telo ho an'ny ray aman-dreny.
Ary koa, ny Big Balloon Ride an'i Peppa Pig, ny sidina helikoptera an'i Miss Rabbit, ary ny Dinosaur Adventure Ride an'i George dia anisan'ireo mitaingina fito misy lohahevitra ao amin'ny Paultons Park natokana ho an'ny mascot malaza ho an'ny ankizy.
Tsy lazaina intsony ny fanampiana fanampiny amin'ny dia roa fanampiny tamin'ny taon-dasa, izay nodinihintsika teto.
Betsaka ihany koa ny fahafaha-mihaona fihaonana sy fifampiarahabana tratry ny kely amin'ny olona tiany indrindra, ary koa ny fivarotana kilalao eo an-toerana raha tianao ny hitondra azy ireo amin'ny fahatsiarovana ny andro.
Ny fidirana amin'ny valan-javaboary dia ahitana an'i Peppa Pig World, ary nisy olona nanamboatra ny sisa amin'ny valan-javaboary ho an'ny ankizy kely kokoa.
2. Alton Towers - Alton, Angletera
The Toro Alton no tranon'ny sasany amin'ireo manintona olona mahafaty indrindra eto an-tany, ao anatin'izany ny rollercoaster 14 tadiavina voalohany indrindra ary ny coaster dropfall voalohany voalohany manerantany, ary azo antoka fa hampatahotra na dia ireo mitady mafy indrindra aza.
Izy io koa dia miompana amin'ny ankizy amin'ny fihirana sy fandihizana CBeebies Land, izay misy 14 diany, fampisehoana mivantana samy hafa, ary hotely mifandraika amin'izany.
izany Parka fialana voly, malaza eo amin'ireo mpizahatany mankany amin'ny morontsiraka Resort Blackpool, manasongadina ireo fisarihana toa an'i Nickelodeon Land ary koa ireo rollercoasters goavambe toa ny The Big One sy ICON, ilay rollercoaster fanombohana indroa voalohany an'ny UK izay mandrisika ny mpitaingin-tsoavaly 88.5ft.
The Flambards dia ao Helston, Cornwall, valan-javaboary ho an'ny ankizy. Ary koa, ny fitsangatsanganana nentin-drazana an'ny Ferdi's Funland, toy ny teacups, ny sambo an-habakabaka ary ny Pirates dia ho tian'ny fianakaviana manana ankizy kely.
Ireo mpankafy dinôzôro dia mety mijery ihany koa ireo dinôzôro Jurassic Journey, manala fosily ao anaty Dino Dig, na mijery ireo fahatongavan'i Dino-Nursey vaovao. Ny lamasinina Andrefana: vaovao kokoa ho an'ny 2021 - mitsambikina!
5. Ilay ondry lehibe – Devon
Ondry lehibe dia andro mahafinaritra any Devon ho an'ny ankizy na inona na inona toetr'andro! Ho an'ny ankizy lehibe, misy roller coaster miampy fampisehoana 12 sy kianja filalaovana mahafinaritra any ivelany, misy pilina mitsambikina, fitsangatsanganana an-tsokosoko ary faritra misoloky.
Ankizy kely koa dia handeha hitsaoka an'i Piggy Pull-along, Tractor Safari, traktera ho azy ireo, pickup, ary pedalos!
The Legoland dia fitsangatsanganana an-tsokosoko ho an'ny tanora latsaky ny 12 taona miaraka amin'ny hetsika maro ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Mody manao olona goavambe rehefa mandehandeha mamaky ny tany Mini, mamelombelona ny tantara tianao indrindra ao amin'ny Fairy Tale Brook, na manaova izany amin'ny rollercoasters sy ny manintona azy ireo.
Raha mila zavatra manokana manokana dia manorata fijanonana mandritra ny alina ao amin'ny Legoland Resort Hotel na Castle Hotel, izay manome karazana kojakoja maro karazana toy ny fialamboly mivantana, trano fonenana misy lohahevitra ary tombony toy ny fidirana amin'ny valan-javaboary tany am-boalohany.
Misy Ivotoerana Fikarakaran-jaza mitokana ho an'ny reny sy ray manan-janaka vao teraka, izay ahafahan'izy ireo mampinono, hanome tavin-tavoahangy na hanova nappies.
Zavatra tokony hatao any Nashville
Zavatra tokony hatao any Kalifornia
Hetsika mahafinaritra any Houston ho an'ny olon-dehibe
The Diggerland no traikefa nahafinaritra indrindra momba ny valan-javaboary anaovan'ny ankizy sy ny olon-dehibe fahaizana mitaingina, miasa, ary mitondra fiara mpitrandraka REAL, mpanary ary milina hafa. Mandritra ny andro fitsangatsanganan'ny tany mahafinaritra dia tsidiho ny Diggerland raha mihady azy ianao!
The Sandcastle Waterpark no playzia an-trano mety indrindra ho an'ny ankizy tia rano, singa iray lehibe amin'ny hetsiky ny fianakavian'i Blackpool.
Ary koa, Sandcastle dia manome fahafinaretana, fientanentanana ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana, feno dobo filomanosana sy slide, lalao rano mifampiresaka, ary ho an'ireo vahiny lehibe, ireo mpitaingin-tsoavaly fotsy.
9. Valan-javaboary akaikiko: Lemur Landings
Lemur Landings dia eo afovoan'ny tranokala fialamboly any avaratr'i Poole sy Bournemouth ary manome andro ho an'ny ankizy milalao malefaka anaty trano.
Misy làlan'ny tady ambany tsy manam-paharoa ho an'ny ankizy sy rindrina LED izay mamela ny mpihanika tsy matahotra hihaino tantara sy hamaha ny piozila, ny pilotra, ny tonelina ary ny kianjan'ny baolina ary ny faritra fandokoana mangina.
The Fambolena adala dia valan-javaboary mampientanentana sy zoo ao amin'ny faritra Pembrokeshire - ary andro mahafinaritra ho an'ny ankizy manana 50 isan-jaton'ny zotram-pizahana sy hetsika na dia rehefa avy aza ny orana!
Betsaka ny manintona ao anatin'izany ny Funfair Vintage, ny toeram-pambolena, ny zoo, na ny toerana filalaovana anaty sy ivelan'ny trano mahavariana ho an'ny ankizy ao amin'ny Folly Farm.
Kianjan'ny lohahevitra an'ny Gulliver dia natao manokana ho an'ny fianakaviana, izay midika fa izy ireo dia mampifanaraka ny fitsidihana sy ny fanintonana ny ankizy kely kokoa.
Raha ny marina, tsy misy ankizy miaraka aminy tsy mahazo miditra amin'ny valan-javaboary ho an'ny vondron'olon-dehibe na olon-dehibe mitokana. Gulliver's World Warrington, Fanjakan'i Gulliver Bath Matlock na Milton Keynes Gulliver Country
Misy ny rollercoasters, ny mitaingina rano, ny faritra hafafiny, ny hazo - izay rehetra mety ankafizin'ny ankizy lehibe kokoa amin'ny valan-javaboary hafa, dia ireo tanora no manana fahafinaretana rehetra amin'ity indray mitoraka ity.
Mbola tanora loatra amin'ny diany ankehitriny? Ny habaka anatiny sy ivelany dia be ary mety ankafizina ihany koa.
Ny Milky Way Adventure Park no ankafizin'ny fianakaviana tanora ao amin'ny manodidina an'i Clovelly, North Devon.
Ankoatr'izay, ny valan-javaboary dia manolotra fampisehoana mivantana ihany koa, efitrano filalaovana malemy ho an'ny latsaky ny dimy taona, ary koa ny Milky Way Railway, ary koa ny fitsangatsanganana sy ny fisarihana toa ny rivodoza Cosmic, ny faritra clone ary ny Time Warp.
13. Adventureland atsinanana
The Adventureland atsinanana dia valan-javaboary natao ho an'ny ankizy latsaky ny folo taona, miaraka amina hetsika atao anaty trano, mitaingina valan-javaboary ary kianja filalaovana ivelany misy lohahevitra.
Avelao ny zanakao hihazakazaka eny amin'ny fasika be eny ivelany, mitsidika ny fivarotana biby fiompy mihira voalohany eran'izao tontolo izao, na manidina eny amin'ny lanitra eny an-damosin'ny Giddy Piggies sasany.
14. Thomas Land ao amin'ny Drayton Manor
The Thomas Land ao amin'ny Drayton Manor manasongadina mitaingina sy hetsika 25 mihoatra ny ankafizin'ny mpankafy ny Nosy Sodor. Tsidiho ny Bertie Bus, maka Harold's Helicopter Tour, na miaina Cranky's, Tower Drop.
Ankizy mikaroka fientanam-po dia faly mankafy mitaingina ny kamiaobe mamaha amin'ny kodiarana voalohany. Ao amin'ny Terence's Driving School dia mety handeha amin'ny Rocking Bullstrode koa izy ireo na hianatra hampiasa traktera.
Tsy misy tsy fahampian'ny hetsika ho an'ny fianakaviana rehetra ao amin'ny Crealy Adventure Park & ​​Resort feno fitsangantsanganana mahafinaritra, faritra filalaovana anaty trano marobe, kaonseritra mivantana ary Fanjakana Buddy Bear.
Manomboka amin'ilay Big Big legendary ka hatrany amin'ny Icon hisokatra tsy ho ela, Blackpool Pleasure Beach manana rollercoasters tena mampientam-po.
Ho an'ny ankizy kely sy ny zaza kely, Nickelodeon Land no toerana haleha. Mifanena amin'i Chase sy Marshall avy amin'ny PAW Patrol, Spongebob Square Pants ary Patrick, na Dora the Explorer rehefa mizaha firenena vaovao.
Ny zaza latsaky ny roa taona dia homena Pleasure Beach Pass maimaimpoana hiditra amin'ny valan-javaboary, izay ahitana manintona toy ny Chinese Puzzle Maze, Pleasure Beach Express, ary Bradley & Bella's Learning Garden.
17. Adventureland atsinanana
Ny Sundown Adventureland ao Retford dia toerana tsara handehanan'ny mpianakavy fialamboly mahafinaritra. Ary koa, ny Angry Birds Activity Park, Rocky Mountain Railroad, ary karazana fitsangatsanganana hafa dia natao ho an'ny ankizy latsaky ny 10 taona avokoa.
At Tontolo Adventures ny Chessington, misy fitsangantsanganana 18 ho an'ny ankizy, ao anatin'izany ny Gruffalo River Ride Adventure, izay ahafahanao miaraka amin'i Mouse amin'ny fitsangantsanganana amoron-tsambo mahafinaritra amin'ny alàlan'ny ala maizina lalina.
Misy ihany koa hetsika mivantana, ary koa ny Chessington Zoo fanta-daza sy ny Sea Life Center.
The Play Factore no faritra filalaovana anaty trano lehibe indrindra any Angletera ary mipetraka ao amin'ny Beyond Center manaitra (eo akaikin'ny arabe afovoan'ny Trafford Center).
Play Factore dia manasongadina ny zava-drehetra ao ambanin'ny tampon-trano iray, ao anatin'izany ny zipline, ny kianja filalaovana baolina kitra anaty trano, ny faritra filalaovana malefaka marobe ary ny faritra misy ny zaza tsy miankina.
Mifaninana amin'ny fianakaviananao amin'ity hazakazaka fohy ity nefa mampientam-po amin'ny lalana go-kart anatiny. Ao amin'ilay kart ihany, ny ankizy sy ny olon-dehibe dia mety hiara-milalao!
Ity toeram-pisidinana anaty rano misy foto-piraty ity dia mety hanintona na dia ny tompon-trano henjana indrindra aza hiverina hiverina bebe kokoa.
Calypso Cove dia mety indrindra amin'ny karazana mpilomano isan-karazany, miaraka amina farihy sy slide (ao anatin'izany ny faritry ny fantsom-pifandraisana mifandraika amin'ny zaza), ary ny trano fisakafoanana amoron-drano dia manampy amin'ny famahanana sy fialofana izay tsy te ho lena.
Ny milina onja ao amin'ny faritra lehibe Calypso Cove dia tsy maintsy jerena amin'ny fianakaviana iray manontolo.
21. Carrbridge, Ekosy
The Landmark Forest Adventure Park, miorina eo afovoan'ny valan-javaboary Cairngorms, mahasarika ireo fianakaviana mitady andro feno fiasana.
Ankoatr'izay, be dia be ny zavatra azon'ny ankizy sy ny lehibe ankafizina, manomboka amin'ny Wild Water Coaster mankany amin'ny Skydive traikefa ary ny Tarzan Trail.
The Flamingo Land Mety tsy hiseho amin'ny lisitry ny valan-javaboary malaza indrindra any Angletera, fa aza manaiky ho voafitaky ny anarana ianao - betsaka ny zavatra atolotra ny valan-javaboary afa-tsy ny vorona ihany.
Misy liona, tigra ary baboons eo amin'ireo zava-manan'aina marobe eto, saingy mahavariana ny isan'ny mitaingina. Miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fitsangantsanganana ataon'ny mpianakavy dia misy ihany koa ny traikefa faran'izay mafy indrindra ho an'ireo tena sahy, toy ny Velocity, izay ahafahanao mihazakazaka superbikes.
Raha mitady zavatra mahasalama kely ianao dia ao ny Peter Rabbit Adventure, izay ahafahanao mihazakazaka mamaky an'i Peter sy Lily!
Fitaovana efa niasa teo akaikiko
Fampindramam-bola PPP sy tsy an'asa
Zavatra tokony hatao any Big Bear
23. Fialam-boly akaikiko: M & D's
M & D's, Valan-javaboary ankafizin'i Scotland, dia tsy hita eo amin'ny laharam-pahamehana amin'ireo parka lohahevitra lehibe indrindra any Angletera.
Ity fisarihana ity, miorina ao amin'ny Strathclyde Country Park mahafinaritra, dia mahafinaritra na oviana na oviana ny toetr'andro - raha tsy tsara ivelany, dia araraoty ny lalao milamina sy ny ala tropikaly tropikaly tropikaly voalohany any Skotlandia.
Atambaro ny dia mankany amoron-dranomasina miaraka amin'ny fijanonana Brighton Palace Pier, izay manolotra karazana hetsika ankafizin'ny mpianakavy toy ny lalao arcade sy ny diabe mahazatra.
Brighton dia toerana mahafinaritra hitsidihana mandritra ny taona, koa maninona raha andramana ireo hetsika hafa?
Stoke's Waterworld dia zaridaina tropikaly mahafinaritra any Midlands! Io no fomba tsara indrindra hiantohana ny fitsangantsanganan'ny fianakaviananao manao splash, miaraka amin'ny diany sy lalao 30, ny faritra anatiny sy ivelany, ary ny rano 1 tapitrisa litatra (matotra!).
Avy amin'ny Space Bowl mihodinkodina mankany amin'ny Hole Mainty, izay mitondra anao midina ao anaty haizina, ny mpianakavy tsy misy tahotra dia mety mankafy fientanam-po amam-boninkazo amin'ny sary mihetsika isan-karazany.
Raha tsy lazaina intsony ny The Nucleus, Waterworld's Water Rollercoaster voalohany misy olana 375 metatra – ampy herim-po ve ianao?
Manaova tsangambato ho an'ny Bubble Pools ao anaty na any ivelany, na ny Lazy River Ride, izay azo alaina ara-potoana, raha mitady toerana mety sy fialan-tsasatra ianao.
Mahafinaritra ny fianakam-pianakaviana na inona na inona toetr'andro, ao anatin'izany ny rapid, ny dobo onjan-dranomasina, ary ny lalan'ny fanafihana rano!
Tsy misy toerana tsara kokoa hampisehoana ny zanakao amin'ny fahafinaretana amin'ny tondra-drano noho ny eto! Mangidihidy fotsiny ireo sahy avelanao handeha.
The Tontolon'ny rano Coral Reef Bracknell miverina ary tsara kokoa noho ny hatramin'izay taorian'ny fanamboarana be dia be, tsy nirehareha na dia iray aza, fa roa, fa fivezivezena dimy kosa. Heverinao ve fa ny tarika alika misy ranomasina masira dia manana izay ilainy raha raisina amin'ny The Canon?
Miomàna halefa amin'ny rano mitete 67 metatra amin'ny hafainganam-pandeha tena haingana! Ny fianakaviana misy zaza latsaky ny dimy taona dia mety hivoy lakana mihoatra ny sambo jiolahin-tsambo, ganagana ao ambanin'ny tafondro anaty rano, ary miala sasatra ao amin'ny Little Corals Toddlers 'Pools etsy ankilany.
Namboarina tamina efitrano malalaka hilalao ny zanakareo kely izy ireo. Fiara azo namboarina. Miaraka amin'ny famolavolana feo sy ny valin'ny jiro, ny Storm Chaser dia mamerina ny fientanentanan'ny ranomasina misokatra ary mamela ny mpiray sambo tsirairay handray ny diany avy.
Aiza bebe kokoa no hahitanao ny dragona, vatan'ny Aztec, ary tandavan-tendrombohitra misy renirano? Misy ihany koa ny iray amin'ireo valan-javaboary an-trano lehibe indrindra any Angletera, miaraka amin'ny 18 mitaingina sy manintona.
Sandcastle manasongadina ny Water Park. Alaharo ny tempolin'ny Aztec Falls hitondra anao amin'ny maizina ary / na hihazakazaka any amin'ny farany ambany ny slide dragona, izay hianjera tampoka dia hamoaka ny zavaboary masiaka resin'ny mpandresy!
Ny zaridaina iray manontolo dia azo aleha amin'ny seza misy kodiarana ary mety handray mpilomano any amin'ny lava-pilalaovana manjelanjelatra ianao amin'ny voalohany.
28. Ny LC Swansea, Glamorgan, ary Cardiff
Mihantona folo ao amin'ny The LC Swansea, izay ny slide, whirlpools, ary faritra filalaovana misy rihana efatra dia tsy azon'ny mpanao simulator misambo-drivotra ihany.
Rehefa avy nanome fiarovan-doha fiarovana ny ankizy dia mety hanisy lasely ny soavaliny mahatoky, antsoina hoe tabilao, ary hanandrana mitaingina tampon-trambo.
Miankina amin'ny haavon'ny fahaizany dia afaka mitaingina ny tummy izy ireo na mijoro mitsangana ary misedra toy ny volon-dranomasina tena izy; sarotra kokoa noho ny fisehoany nefa mahafinaritra be.
Avy eo dia misy ny fivezivezena amin'ny renirano kamo, milina onja ary maze anaty rano feno tetezana sy lavaka baolina ho an'ireo ankizy kely.
Io simulator surfboard io dia tokony ho ny tsara indrindra amin'izany. Taorian'ny fitsirihana ireo zaridaina anaty rano maro any UK - izay misy maro.
Dunes Splash World eo amin'ny morontsirak'i Merseyside dia mampita anao any amin'ny tropika. Misy flume efatra misy ambaratonga loza isan-karazany, toy ny Speed ​​Freak Flume Ride.
Tena isa haingana dia haingana, araka ny anarany, izay mamaky ny zoro amin'ny mpandeha rehefa miezaka mamaky ny firaketana. Ny Family Fun Flume Ride dia malefaka kokoa, miaraka amin'ny fampisehoana maivana ary fantsom-misted handehananao.
Tots kely dia mety maka lesona lomano na siny kely amin'ny dobo filomanosana kely - tadidio fotsiny ny dimy hamonoana an'i Turtle, izay matetika no sendra milomano.
Mety ho an'ny seho 'Quiet Night' ataon'izy ireo izany. Ny ekipa Aiming High dia namorona azy ireo ho an'ny ankizy sy ny tanora manana fahasembanana.
30. Valan-drano amoron-dranomasina manga, Pembrokeshire
Fitsangatsanganana any amin'ny Valan-drano amoron-dranomasina manga any Wales dia hitondra anao any ambanivohitra Welsh. Miaraka amin'ny volony, ny toerana dia manolotra karazana singa tena misy, toy ny dobo onja malaza misy lamina enina miavaka sy geysera mangotraka ao ambanin'ny rano.
Namorona tora-pasika anaty trano aza izy ireo izay tsy mitovy amin'ny zavatra hitanao any Angletera, tsy misy loto isaky ny zoro sy zoro.
Vokany! Tsidiho ny ranomasina fito miaraka amin'ny dia an-kalamanjana amin'ny The Falls, izay mijanona eo ivelan'ny rafitra mandritra ny fotoana fohy alohan'ny hidirana indray ary hanary anao ao anaty dobo filomanosana!
Ny tsara indrindra amin'ny kalitaon'ny tontolo iainana. Nafanaina tanteraka tamin'ny alàlan'ny solika biomassa ny rano, ary voalaza fa io ihany no zaridainan'ny rano any Angletera.
The Leyton Leisure Lagoon. Raha tsapanao fa fotoana tokony hikarakarana ny ankohonanao amin'ny andro tsy hay hadinoina izany dia tsy misy zavatra mampientanentana kokoa noho ny fitsidihana ny iray amin'ireo valan-javaboary lehibe indrindra any Angletera!
Andro iray ao amin'ny valan-javaboary dia manaitaitra ny rehetra, manomboka amin'ny fientanam-po lehibe ka hatramin'ny morontsiraka bitika.
Ankoatr'izay, ny safidintsika amin'ireo valan-javaboary tsara indrindra any Angletera dia manome mihoatra ny morontsiraka fotsiny - ny fialamboly amin'ny rano, ny biby vahiny, ary ny mitaingina lamasinina no vao manomboka.
32. Tany misy ny dinôzôro velona, ​​Worcestershire
West Midland Safari Park dia hitondra anao hiverina any amin'ny Tany misy ny dinosaoro velona. Hihaona amin'ny dinôzôro animatrônika isan-karazany ianao ary aza hadino ny fotoana hitrandrahana fosilanao ao amin'ny Dino Dig.
33. Ivotoerana National ShowCaves any Wales
Ny National ShowCaves Center ho an'ny Wales, miaraka amina maodelim-piainana maherin'ny 220 mahaliana, dia tsy maintsy mandeha amin'ny làlan-kaleha mandritra ny andro tsy ampoizina. Hanana ny tsinay handray ilay T-Rex mampatahotra ve ianao?
34. Lagan Valley Leisure Plex, Irlandy Avaratra
Na te hanana fientanentanana avo lenta ianao na aleonao moramora, Lagan Valley LeisurePlex manana zavatra ho an'ny rehetra.
Manomboka amin'ny fivezivezena mandeha haingana amin'ny adrenaline-pumping mankany amin'ny renirano malaina sy riandrano mahafinaritra handro ao ambany, io zaridaina anaty rano tsy mampino io dia manana an'io avokoa. Misy ihany koa ny fizarana ankizy natokana miaraka amina hetsika maro. Inona no mahita!
The Park manondro ny tenany ho "renivohitra mampientam-po" ao amin'ny firenena, ary tsy natao ho an'ireo torana am-po izany. Ary koa, ny "trinite tsy masina" an'ny mitaingina dia misy an'i Stealth, iray amin'ireo rollercoasters haingana indrindra any Eropa amin'ny 0-80mph ao anatin'ny roa segondra; Colossus, rollercoaster 10 voalohany manerantany; ary ny hery 4.5 G an'ny Nemesis Inferno.
Mbola velona ve ianao? Ho an'ireo 12 sy mihoatra, misy ny Saw – The Ride, fiakarana mitsivalana mahatsiravina, ary Saw Alive, maze mahatsiravina mivantana mifototra amin'ireo tselika mahatsiravina.
Fivarotana Verizon eo akaikiko
Zavatra tokony hatao any Columbia, SC
Buy Best Me Near Me
Ireo valan-javaboary misy lohahevitra sy faritra filalaovana ho an'ny ankizy kely dia be any Angletera, miaraka amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny lavaka baolina sy ny dobo onja mankany amin'ny lava-pasika ary ny fifaliana. Ity misy sombin-tànana heverinay fa ho tian'ny zanakao! Ny valan-javaboary lehibe indrindra any Angletera.
Betsaka ny fientanam-po ho an'ny ankizy lehibe, ao anatin'izany ny fidinan'ny Oblivion mitsivalana sy ny fientanentanan'i Air, ary koa ireo tianao alohan'ny zatovo toa ny Reniranon'i Congo River. Ny kely, mandritra izany fotoana izany, dia manana ny Cloud Cuckoo Land. Ny manintona hafa dia misy ny Sea Life Center sy ny zaridainan'ny rano tsara.
Tianay ny lisitry ny valan-javaboary fialamboly tsara indrindra eto akaikiko saingy mbola kely loatra ny zanakao noho ny sasany amin'ireo mitaingina azy? Tsidiho ny iray amin'ireo zaridaina lohahevitra ambony ho an'ny ankizy eto.
Azafady mba hametraha hevitra, toy ity lahatsoratra ity ao amin'ny Amusement Parks Near Me. Aza adino ny milaza izany amin'ny namanao sy ny fianakavianao!
Tags:zaridaina lohahevitra tsara indrindra ho an'ny uk 5 taona, zaridaina lohahevitra tsara indrindra ho an'ny 7 taona, zaridaina lohahevitra tsara indrindra ho an'ny zaza 8 taona uk, zaridaina misy lohahevitra gulliver, Valan-javaboary fitsangantsanganana an-kalamanjana uk, zaridaina lohahevitra kely, zaridaina lohahevitra ho an'ny ankizy 2 taona uk, Zaridaina lohahevitra momba ny zazakely akaikiko
Google Maps Timeline Review & Dingana ahafahana mamela na manafoana ny toerana misy anao
Zavatra mahafinaritra 17 hatao amin'ny Big Bear miaraka amin'ny alika isan-karazany
Ahoana ny fomba hitsitsiana vola amin'ny fitsidihana an'i Georgia State Park